Antoine Griezmann oo la barbardhigay saaxiibkiis Mbappé, laaciibkaa Juventus ee Cristiano Ronaldo – Gool FM
(Atlético) 09 Okt 2018. Weeraryahanka reer France iyo kooxda Atlético Madrid ee Antoine Griezmann ayaa sheegay inay muhiim tahay in laacib kasoo jeeda dalka France uu ku guuleysto abaal marinta xiisaha badan ee Balón de Oro.
“Ku guuleysiga koobka aduunka 2018, waa arin cajiib ah, ma jirin wax hadal ah, wax walba waxaa ka buuxay dareen, ma ogaaneysid meesha aad aadi karto, ma waxaad u tagtaa taageerayaasha, qoyskaaga ama saaxiibadaa”.
“Kylian Mbappé wuxuu i xasuusinayaa Cristiano Ronaldo xiligii uu ku sugnaa kooxda Manchester United, wuxuu ka ciyaari jiray garbaha isagoo aanan dooneynin inuu dhaliyo wax gool ah”.
“Lakiin hadii xidiga reer France uu ku biiro Real Madrid, wuxuu dhalin doonaa ugu yaraan 50 gool”
“Anigu ma barbardhigi karo xirfadeyda kubada cagta xidigaha Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi, waa laba halyeeyo dhab ah, sanad kasta waxay joogaan halkan, waxay dhaliyaan 50 gool xili ciyaareed kasta, waxay ku guuleysteen koobab iyo abaal marino badan ee Balón de Oro”.
“Balón de Oro, aniga ahaan wuxuu ii yahay riyo, waa abaal marinta ugu fiican ee taariikhda, waxaana jira xidigo badan, waxayna noqon doontaa riyo aad kaga mid noqon doonto kuwa horey ugu soo guuleestay abaal marintan”.